Hunter Hunter (2020) | MM Movie Store
နာမညျကို ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ အမဲလိုကျတဲ့ကား ဆိုတာ သိကွမှာပါ။ ဆိုတော့ ….. အမဲလိုကျတဲ့ကားတှကွေိုကျတတျတဲ့လူတှေ သဘောကမြယျ့ကားမြိုးပါပဲ။ ဘဝဟာ မုဆိုးတဈလှညျ့ သားကောငျတဈလှညျ့ပါပဲ။လေးဖွူရဲ့အမဲလိုကျမုဆိုး သီခငျြးထဲကလိုပေါ့ဗြာ။
မုဆိုးကွီး ဂြိုးဆကျတို့ သားအမိသားအဖ ၃ ယောကျဟာတောထဲမှာ အိမျကလေးဆောကျပွီး နကွေပွီး အမဲလိုကျတဲ့အလုပျနဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပွုကွတာပါ။သူတို့ကို ခွိမျးခွောကျနိုငျတာကတော့ ဝံပုလှတေဈကောငျပါပဲ။ ပုံမှနျဆိုရငျ လူက မုဆိုး တိရစ်ဆာနျက သားကောငျပါ။
တိရစ်ဆာနျက မုဆိုး ဖွဈပွီး လူက သားကောငျဖွဈတဲ့အခြိနျမှာတော့ ….. Horror, Thriller ကွိုကျသူမြားအသညျးတယားယား ရငျတဖိုဖိုနဲ့ ဇာတျကို အဆုံးထိ ရောကျလို့ ရောကျမှနျးမသိအောငျှဲချေါသှားမယျ့ ဇာတျကားမြိုးပါပဲ။
IMDb Rating – 6.3/10 ရရှိထားပွီး . Thriller ကား ကွိုကျနှဈသကျသူတှအေတှကျတော့ကွညျ့ကောငျးမယျ့ကားမြိုးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
နာမည်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အမဲလိုက်တဲ့ကား ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ဆိုတော့ ….. အမဲလိုက်တဲ့ကားတွေကြိုက်တတ်တဲ့လူတွေ သဘောကျမယ့်ကားမျိုးပါပဲ။ ဘဝဟာ မုဆိုးတစ်လှည့် သားကောင်တစ်လှည့်ပါပဲ။လေးဖြူရဲ့အမဲလိုက်မုဆိုး သီချင်းထဲကလိုပေါ့ဗျာ။
မုဆိုးကြီး ဂျိုးဆက်တို့ သားအမိသားအဖ ၃ ယောက်ဟာတောထဲမှာ အိမ်ကလေးဆောက်ပြီး နေကြပြီး အမဲလိုက်တဲ့အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြတာပါ။သူတို့ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တာကတော့ ဝံပုလွေတစ်ကောင်ပါပဲ။ ပုံမှန်ဆိုရင် လူက မုဆိုး တိရစ္ဆာန်က သားကောင်ပါ။
တိရစ္ဆာန်က မုဆိုး ဖြစ်ပြီး လူက သားကောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ….. Horror, Thriller ကြိုက်သူများအသည်းတယားယား ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ဇာတ်ကို အဆုံးထိ ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိအောင်ွဲခေါ်သွားမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါပဲ။
IMDb Rating – 6.3/10 ရရှိထားပြီး . Thriller ကား ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့ကြည့်ကောင်းမယ့်ကားမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။